प्रदेशका काममध्ये वाग्मती अगाडि छ : आन्तरिक मामिलामन्त्री पाण्डे « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौँ, १९ वैशाख: नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा (एमाले) का युवा नेता केशवराज पाण्डेले यही वैशाख १५ गते वाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा नियुक्त भई कार्यभार शुरु गर्नुभएको छ । कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जनताका बीचमा प्रदेश सरकारको पृथक पहिचान स्थापित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । प्रदेश सरकारका यिनै चुनौती, सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत विषयमा मन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्मादित विवरण :
पाण्डे : मैले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ब्रिफिङ शुरू गरेको छु । गृह प्रशासन, कानून, सञ्चार क्षेत्र हेर्र्ने यो मन्त्रालयका विगतका कामको समीक्षा शुरू गरेको छु । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने तयारीमा हामी छौँ । मेरो अध्यक्षतामा यही वैशाख १७ गते प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेर अहिलेको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका कामका समन्वय र भावी योजना बारेमा समीक्षा गरिएको छ ।
पाण्डे : हामीले प्रदेशको स्वास्थ्यसमेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । सुरक्षा समितिको बैठकमा मैले सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई कुनै सुविधा नपुगेको भए माग्न र आफ्नो कर्तव्यपालनामा कमजोरी नगर्न भनेको छु । खासगरी शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ भने सीमा व्यवस्थापन र निषेधाज्ञाको पालनामा सशस्त्र प्रहरी र अन्य काममा नेपाल प्रहरी तैनाथ छन् । कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा भए पनि राजमार्ग खुला छ । बिरामीलाई तत्काल अस्पताल लान परेमा प्रहरीले सहयोग गर्नेछ ।
पाण्डे : सङ्घीय सरकार पनि यहीँ छ । केही हदसम्म हामी सङ्घको छायामा परेका छौँ तर प्रदेशका काममध्ये हाम्रो प्रदेश अगाडि छ, अपराध नियन्त्रणमा यो प्रदेश सुधारिएको छ । सामूहिक बस्ती, सामूहिक खेती, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणजस्ता प्रभावकारी हुँदैछ । हामी फलफूलमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । कृषि अनुदानलाई टाठाबाठाले उपयोग गर्नेभन्दा पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्ने गरी वितरणको योजना बनाउँदैछौँ । हामी किसानलाई रू पाँच लाखसम्म विनाधितो रू तीन प्रतिशतमा ऋण दिँदैछौँ ।
पाण्डे : यस प्रदेशले हालसम्म ४५ कानून बनाइसकेको छ । अन्य कानून बन्ने क्रममा छन् । सङ्घीय निजामती कानून र प्रहरी ऐन बन्न बाँकी रहँदा यस क्षेत्रका काममा केही असुविधा भएको छ । अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्रको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हिच्किचाएको जस्तो देखिन्छ । सबै प्रदेशका लागि यो एक प्रकारको समस्या हो ।
पाण्डे : हाम्रो प्रदेशले मुख्यगरी भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्र तथा पिछडावर्गको उत्थान गर्न लाग्नुपर्छ । हामी दीर्घकालीन लाभ हुने तथा स्थायित्व दिने खालका काम गर्नेछौँ । पहिलाको जस्तो पाइप बाँड्ने काम अब हामी गर्दैनौँ । पाइप बाँड्ने होइन, एक घर एक धारा बनाउने हो । अब पाइप बाँडे बेरूजू हुन्छ । यस प्रदेशमा हरेक घरलाई खरको छानाविहीन बनाउनेछौँ ।
एमालेभित्र विवाद छ । पार्टीबाट विद्रोह गरेर वा छाडेर जान सकिन्छ । कसैलाई आफ्नो राजनीति खुम्च्याउन रहर छ भने त्यो गर्ने बाटो खुला छ तर एमालेमै रहेर राजनीति गर्दा अनुशासित भएर रहनुपर्छ । पार्टीको निर्णय र दलको विधान सबैले मान्नुपर्छ । पार्टीमा रहेर फ्लोर क्रस गर्नु अराजनीतिक काम हो । मलाई विश्वास छ अब त्यस्तो हुनेछैन ।-रासस
ओलीमाथि भीम रावलको आरोप : देशव्यापी रुपमा गुटबन्दी गर्ने, र चर्को रुपमा त्यो पैसा कहाँबाट आयो असिमित ?
काठमाडौं, २६ बैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता डा. भीम बहादुर रावलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी
‘यदि हाम्रो विरुद्वमा संसद्मा बहुमत पुग्यो भयो भने हामी तत्काल सरकार छोडेर विपक्षमा बस्न तयार छौँ’ : विशाल भट्टराई (भिडिओसहित)
नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले वर्तमान सरकारले ईतिहासमा कसैले गर्न नसकेका
सरकारका कारण देश अस्तव्यस्त भयो, जनताले दुःख पाए : डा. भण्डारी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २५ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभासद डा.
आफ्नो र पार्टीको साख जोगाउने हो भने केपी ओलीले सरक्क राजीनामा दिए हुन्छ : डा. खड्का (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २४ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले कोभिडविरुद्धको
‘सुदूरपश्चिम सरकार पूर्ण असफल, महामारी नियन्त्रणको लागि गम्भीर भएन’ : भरत खड्का
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश सांसद भरत खड्काले कोरोना संक्रमण सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा
‘कोरोनाबाट बच्नको लागि अहिले मुख्य र दिगो उपाय भनेको त भ्याक्सिन नै हो’ : डा. दिक्षित
बरिष्ठ चिकित्सक तथा नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सरकारले सबै नागरिकमा कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनको व्यवस्था
काठमाडौं, २० बैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
‘एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा देउवासँग सहमति भएको भन्ने कुरा यथार्थसम्मत् होईन’ : देवप्रसाद गुरुङ
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन छिट्टै फिर्ता गर्ने स्पष्ट